जनशक्ति, साइकल प्रयोग र पेट्रोल बचत | चितवन पोष्ट
संघीयता यो देशमा लागू हुन सक्छ र सक्दैन भन्ने विवाद हुँदै गर्दा लागू हुन सक्छ भन्नेहरु बलिया देखिएपछि यो देशमा संघीयता लागू गर्ने सहमतिसहित एकथान संविधान बनाइयो । हिजोआज यो नयाँ भन्ने गरिएको नेपालमा संघीयता भित्र्याएपछि सकी–नसकी, जानी–नजानी, अब विकास गर्ने हो, कुनै पनि हालतमा विकास गर्ने हो भन्दैछन्, तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधिहरु । तर, उदेकलाग्दो विषयचाहिँ के भएको छ भने भौतिक विकास मुखले बोलेर मात्र हुन्न भन्ने कुरा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई थाहा रहेनछ । भौतिक समृद्धिका लागि कुनै पनि चीजको निर्माणले वा उत्पत्तिले आम्दानी र सुविधा दुवै दिएको हुन्छ । सुविधामात्रै दिने तर नोक्सानीचाहिँ हरेक दिन व्यहोर्न पर्ने अवस्था आयो भने त्यो विकास होइन क्षति हो । विनास हो । उदाहरणका लागि आजको यो नेपालमा आँखा चिम्लिएर विदेशबाट सवारीका साधनहरु मोटरसाइकल, कार, मिनीबस, माइक्रोबस, ट्रक, बस, टेम्पो खरिद गरिएको छ । पहिलो कुरा त यी सवारीका साधनहरु कुन प्रयोजनका लागि कति संख्यामा चाहिन्छ भन्ने मुलुकले हिसाब गरेन । अर्कोतर्फ, ह्वारह्वार्ती भित्र्याइएका सवारीसाधनहरुमा प्रत्येक दिन पेट्रोल, डिजेल र मोबिल हालियो । यसरी पेट्रोल, डिजेल र मोबिल खरिदमा मुलुकको ठूलो धनराशि विदेशियो, त्यो पनि डलरको रुपमा । हिसाब गर्दा यस्ता बेढंगे पाराले खरिद गरिएका साधनहरुबाट आम्दानीभन्दा नोक्सानी ज्यादा भएको प्रमाणका रुपमा सधैँभरि पार्टपुर्जा फेरिरहनुपर्ने र ती पार्टपुर्जासमेत विदेशबाटै झिकाउनुपर्ने भएको हुँदा धन पलायन भएको सीधा देखिएको छ । यो तरिकाले धन खेर गएको र यही कारण मुलुक आर्थिकरुपले कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई भौतिक विकास भन्न मिल्दैन भने हेर्दामात्रै सवारीसाधनले भौतिक सुविधा दिएको देखियो ।
यथार्थमा यतिबेला चाहिनेभन्दा ज्यादा सवारीसाधनले गर्दा एकातिर वातावरण प्रदूषित भएको छ, अक्सिजनमा कार्बनडाइअक्साइड मिसिँदा जनताको स्वास्थ्य बिग्रिएको छ र अर्कोतर्फ फेरि सवारीसाधन ज्यादा हुँदा जामको समस्या देखिएको छ । धन विदेश पलायन, जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर र जामको अवस्थालाई हेर्दा यतिबेला आधुनिक सवारीसाधनले भौतिक विकास भएको भन्नेहरुको मुख थुनिदिएको छ भने अब यो अवस्थालाई परिवर्तन गरेर अनावश्यक सवारीसाधन आयातमा रोक नलगाउने हो भने निकट भविष्यमै यो नयाँ भनिएको नेपालमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोण र आर्थिक क्षतिका दृष्टिकोणले ठूलै संकट उत्पन्न हुने निश्चित छ । त्यस कारण, भौतिक विकास गर्ने हो भने अब सवारीसाधन आयात र प्रयोगमा नयाँ नीति तुरून्त लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यस्ता पेट्रोल र डिजेल प्रयोग गरिने सवारीसाधनलाई भन्दा नेपाल सरकारले साइकल प्रयोगका लागि जनतालाई आह्वान गर्न सक्छ । यो खालको आह्वान गर्नुअघि अत्यावश्यक काममा बाहेक जनप्रतिनिधिहरुलाई पेट्रोल, डिजेल प्रयोग गरिने सवारीसाधन प्रयोगमा नीति बनाएरै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । देशभित्रको आम्दानीजति सबै सवारीसाधन खरिद र मर्मत, पेट्रोल÷डिजेलमा सिध्याएपछि कहिले कसरी हुन्छ देशको विकास ? नेपालका केही जिल्लाबाहेक हिजोआज बाटोघाटोको सुविधाले साइकल प्रयोगमा सहजता देखिएको छ । वातावरण सफा भइरहने, जनताको स्वास्थ्यमा सुधार आउने र आर्थिक क्षति नहुने हुँदा नेपाल सरकारले यदि अब मुलुकमा विकास भित्र्याउँछु भन्छ भने “साइकल चलाऔँ” अभियान सुरू गर्नैपर्छ ।
अब रह्यो भौतिक विकासका लागि जनशक्तिको आवश्यकताको विषय । चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा देखिने एउटामात्र चीज चिनियाँ ग्रेटवाल कुनै देवीदेवताको आशीर्वादले बनेको होइन, मान्छेले बनाएका हुन् । आज विश्वमानवले प्रयोग गरिरहेका सुविधाका साधनहरु हवाईजहाज, टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोबाइल, घडी, अनेक नामका सवारीसाधन, पक्की घर, पुल, बाटो सबै–सबै मान्छेले बनाएका हुन् । यस्ता चीज निर्माणमा जनावरमा बाघ, भालु, हात्ती, बँदेलको कुनै भूमिका छैन, न त प्रकृतिका अन्य वस्तुहरु डाँडाकाँडा, जंगल र नदीनालाहरुको नै कुनै सहभागिता छ । सबै भौतिक विकास मान्छेले गरेका हुन् । अब स्पष्ट प्रमाणका रुपमा यस्ता भौतिक विकासलाई मानेर भन्न सकिन्छ कि विकासका लागि जनशक्ति अर्थात् मान्छे त चाहियो चाहियो । सुनचाँदी, नेपाली नोट, अमेरिकन डलर वा भारतीय पैसाले भौतिक समृद्धि दिने होइन, मान्छे त अवश्य चाहिन्छ । संसारमा जे गर्न सक्छ मान्छेले नै गर्न सक्छ ।
एउटा ताजा उदाहरण यो छ कि केही समयअघि नेपाली कामदारलाई मलेसियामा शोषण भएको शीर्षकमा निकै जोडदार बहस र छलफल भयो । आखिर एकबारको जुनीमा ओली सरकारले मलेसियाले न्यायपूर्ण तरिकाले व्यवहार गर्दैन भने हामी नेपाली कामदार मलेसिया पठाउँदैनौँ भन्यो । केही समय नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान रोक्यो । केही दिनमात्रै रोकेको के थियो, मलेसिया सरकार आत्तियो । उसले भन्यो– “नेपाली कामदारलाई मलेसिया आउन रोक्दा हाम्रो भौतिक विकास ठप्प हुने भयो, कृपया भन्नुस् हामीले के सहयोग गर्नुप¥यो, हामी तयार छौँ ।” मलेसिया आत्तिएर नेपालसँग कामदार माग्यो । भिसा फ्री दियो । अनेक नामका सुविधा दिने विषयमा नेपाललाई ल्याप्चे ठोकिदियो । यो काम फत्ते गर्न मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री नै नेपाल आए । मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग हात मिलाएर सम्झौताको फाइल साटे । हो, यही अवस्थाबाट पुष्टि हुन्छ कि भौतिक विकासका लागि जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । दक्ष, अदक्ष वा अद्र्धदक्ष जुनसुकै खालका जनशक्ति किन नहून्, मुलुकको विकासका लागि नभई नहुने औजार हुन् ।
अब अहिलेका नयाँ जनप्रतिनिधिहरु हामी यो गर्छौं, त्यो गर्छौं केही समय पर्खिनुुस् भन्दैछन् । तल्लो निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यसो भन्दै बिताएको आयु दुई वर्ष पुग्यो । यिनीहरु विकासको नक्सा बनाउन अल्मलिएका छन् भने पर्याप्त बजेट जुटाउन यिनीहरुलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । मुस्किलले नक्सा बनाउलान्, बजेट पनि तानतुन पार्लान् तर अब यो देशमा भौतिक निर्माण र विकासका लागि जनशक्ति जुटाउन भने अत्यन्त कठिन हुने निश्चित छ । आज आफ्नै देशका जनता भारत, दुवई, कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया र युरोप÷अमेरिकातिर ओइरिँदा नेपालमा आफ्नै देशको भौतिक समृद्धिका लागि जनशक्ति अभाव भएको स्पष्ट देखिएको छ । आफ्नो देशको जनशक्ति अन्यत्र पठाउने र देशको भौतिक विकासका लागि बाहिर देशबाट जनशक्ति भित्र्याउनुको कुनै अर्थ रहन्न । फेरि भौतिक विकासको नाममा चिल्ला सडक बनाउने तर त्यो सडक प्रयोग गर्ने जनताचाहिँ नहुने, चिल्ला सडकका फोटो मात्र सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थालाई पनि भौतिक विकास भन्न मिल्ने छैन ।
कुरा यतिबेला रेलको पनि छ । नेपालमा रेल चाहिएको छ कि छैन ? चाहिएको भए बनाउनुपर्छ, तर चाहिएको हो वा होइन यतिबेलै निक्र्यौल गर्न जरुरी छ । फेरि रेल सञ्चालनले मात्रै देश विकास हुने होइन । हिसाब अहिल्यै गर्नुपर्छ । रेलमा मान्छे यात्रा गर्ने हो वा मालसामान ढुवानी गर्ने हो ? ढुवानी र मान्छे दुवैका लागि हो भने सडक यातायातको अवस्था के हुन्छ ? रेल सञ्चालनले सडक यातायातलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? सडक यातायात र रेल यातायातलाई यात्रु पुग्ने वा नपुग्ने वा रेल सञ्चालनको सकारात्मक प्रभाव कति पर्ने हिसाब अहिल्यै गर्न उपयुक्त हुन्छ । रेल सञ्चालनपछि अरबौँअरबको लगानी रहेको सडकमा गुड्ने यातायातका साधनहरुले आमहड्ताल गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको समाधान कसरी हुन्छ ? फेरि रेलको पटरी उप्काउने वा बस, मिनीबस विस्थापित गर्ने ? देशमा जनसंख्या कति छ ? विदेश जाने–आउने गर्ने मोबाइल जनशक्ति कति छन् र देशभित्र बसिरहने जनता कति छन्, कतिले सडक यातायात र कतिले रेलको डिब्बा प्रयोग गर्लान् ? यस्ता हेर्दा झिनामसिना कुरा नै पछि डरलाग्दा समस्याका रुपमा देखा पर्नेछन् । अहिल्यै छिनोफानो गर्दा कल्याण हुन्छ ।
फेरि पनि जताबाट घुमाएर हेर्दा पनि यही देखिन्छ कि रेलसेवा सञ्चालनका लागि पटरी बिछ्याउन होस् वा नयाँ बाटो खन्न र कालोपत्रे गराउन, जेसुकै भए पनि जनशक्ति चाहिन्छ । साँचो कुरा यही हो, यतिबेलाको नेपालमा यस्ता भौतिक विकासका काममा प्रयोग हुने जनशक्ति पर्याप्त छैन । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि काम गर्न सक्ने जनशक्तिको गणना अहिल्यै गरौँ, पछि पश्चात्ताप हुने काम नगरौँ । संसारका सबै देशले आफ्नो देशको जनसंख्या गन्ती गर्छन् । आज काम गर्न सक्ने कति छन्, भोलि काम गर्न सक्ने कति र कामै गर्न नसक्ने जनता कति छन्, हिसाब गर्नुपर्छ । हिसाब ठीक तरिकाले गरेपछि मात्रै देशको भौतिक समृद्धिबारे सोच्न सकिन्छ । भौतिक विकास जनताको लागि गर्ने हो । यसका लागि आफ्नै देशको जनताले आफ्नै लागि गर्ने हो भन्ने जानकारी सरकारले जनतालाई दिनुपर्छ । अब हरेक कोणबाट हेर्दा यही देखिन्छ कि यो देशको समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले रोजगारी दिएर आफ्नो देशको जनतालाई आफ्नै देशमा अड्याउनुपर्छ । दोश्रो सूत्रका रुपमा साइकल प्रयोगको नियम कम्तीमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र अन्य सरकारी तलब खानेहरुलाई अनिवार्य लगाउनुपर्छ । निजी कार, जिप र मोटरसाइकल आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । तेश्रोमा अबदेखि कुरा गरिखाने खालको शिक्षापद्धतिलाई विस्थापित गरी काम गरिखाने खालको प्राविधिक शिक्षा तलदेखि माथिसम्म पढाउन सुरू गर्नुपर्छ । बस्, ज्यादा टाउको दुखाउन पर्दैन । यत्ति गरे देश उँभो लाग्छ । बाँकी सोच्ने काम त जनताको अभिभावक सरकारको न हो ।